साहित्य समाजको ऐना र अनुभवको संगालो हो : किरण पौडेल ⋆ ए टु जेड समाचार डट कम - ए टु जेड समाचार डट कम
साहित्य समाजको ऐना र अनुभवको संगालो हो : किरण पौडेल
१३ कार्तिक २०७५, मंगलवार २०:१३
कार्तिक १३ –
विद्यार्थी जीवन सँगै चितवनबाट संचार यात्रा सुरु गर्नुभएका किरण पौडेल बि .स २०६१ सालमा सरकारी सेवामा आबद्द हुनु भएको हो । पौडेल अहिले राज पत्रांकित द्दितिय श्रेणीमा कार्यरत हुनुहुन्छ । विद्यार्थी जीवन देखी नै साहित्यमा रुची राख्ने पौडेलले हालै मात्र ‘नाईलको साहारा’ नामक हाईकु सङ्रग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ । साहित्य सँग सँगै पौडेलले संगीतिक क्षेत्रमा पनि कलम चलाऊनु भएको छ । पौडेलद्वारा लिखित ‘शुभकामना’ बोलको राष्ट्रिय भावले ओतप्रोत गीत बिन्ध्यावाशिनी म्युजिक अवार्डको मनोनयनमा समेत परेको छ । उनै पौडेलको सरकारी सेवा र साहित्यिक यात्रालाई समेटेर गरिएको कुराकानी :
नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ ए टु जेड समाचारमा , यहाँको परिचयबाट कुराकानीको सुरुवात गरौ ।
नमस्कार, म किरण पौडेल, घर भरतपुर महानगरपालिका २० चनौलीमा पर्दछ । विवाहित हुँ , छोरी र छोरा छन् । पेशागत हिसावले करिव डेढ दशक देखि सरकारी सेवामा कार्यरत छु भने साहित्य तथा गीत संगीत मेरो रुचिको विषय हो र फुर्सदको समयमा यसमै कलम चलाउने प्रयास गरेको छु ।
साहित्य तथा गीत संगित क्षेत्रमा कसरी र कहिले देखि लाग्नु भयो ?
साहित्यमा त मेरो रुचि पहिले देखि नै थियो । विद्यालय तहदेखि नै त्यसप्रति अभिरुचि रहेको र त्यसका लागि सबैभन्दा बढी प्रेरणा दिने मेरो पूज्यनिय बुबा मम्मी जसले साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थित मात्र भएपनि घरमा पुरस्कार दिने गर्नु भएकाले पनि बढी भन्दा बढी कार्यक्रममा दाजुभाइ नै सहभागी हुन्थ्यौँ । कार्यक्रमबाट पुरस्कृत हुने नहुने आफ्नै ठाँउमा थियो, तर घरबाट पुरस्कृत हुने परिपाटीले गर्दा प्रत्येक कार्यक्रममा हामी सहभागी हुनै पर्छ भन्ने भावनाले गर्दा त्यस किसिमका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन र लेखन तर्फ अभिरुचि वढ्दै गयो ।
सरकारी सेवा र साहित्य क्षेत्रलाई कसरी सँगसँगै अगाडि वढाइरहनु भएको छ ?
वास्तवमा साहित्य भनेको समाजको ऐना र अनुभवको संगालो पनि हो । यिनै अनुभवहरुलाई सार्थकता प्रदान गर्नको लागि फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै साहित्य लेखनमा लागिरहेको छु ।
तपाईका प्रकाशित सृजना र कृतिहरु के के रहेका छन् ?
पचासको दशक देखि नै फुटकर कविता, लघुकथा, हाइकु लगायतका रचनाहरु विभिन्न पत्र पत्रिकामा पाठक सामु आइरहेका थिए भने कृतिको हिसाबले हालै मेरो पहिलो कृति “नाईलको सहारा” हाइकु संग्रह वजारमा आईसकेको छ । यस्तैगरी अर्को कृति गोदावरी हाइकु संग्रह २०७५ साल तिहार अघि नै प्रकाशन र विमोचनको तयारीमा रहेको छ । यसका अलावा गीत लेखन पनि मेरो रुचिको विषय रहेको छ । देश संघियतामा गईसकेपछि प्रदेशबासीहरुलाई शुभकामना दिई लेखिएको “शुभकामना सवै प्रदेशबासीलाई” वोलको गीत यतिखेर विन्दबासिनी म्युजिक अवार्ड २०७५ को नोमिनेशनमा पर्न सफल भएको छ । यो गीत राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत गीतको हिसाबमा नोमिनेशनमा परेको छ ।
सानै देखि साहित्यमा रुचि भएर पनि यसअघि नै कृति प्रकाशनका गर्छु भन्ने लागेन ?
सबैकुरा समयले नै जुराउने रहेछ जस्तो लाग्छ । व्यस्तताका वावजुद पनि आफ्नो साहित्यिक रुचि पुरा गर्ने धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । यस सन्दर्भमा आफुले नै त्यत्ति ध्यान पु-याउन नसकेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ ।
हाईकु के हो र नेपालमा यसको शुरुवात कहिले देखि भयो ? बताईदिनुहोस न ।
जापानमा नियमवद्द छोटो कविताहरुको सुरुवात माचुवा बासोले गर्नुभएको थियो । यही छोटो कवितालाई नै हाईकु भनेर वुझिन्छ । यो शब्द जापानबाट आएको हो । वि सं २०१७ सालमा शंकर लामिछाने ३५ दिनको जापान बसाई सकेर फर्किसकेपछि विस २०१९ सालमा वहाँले लेख्नुभएको हाईकु –
हाईकु लेख्ने नियम के के छन् र कसरी लेखिन्छ प्रकाश पारिदिनु हुन्छ कि ।
हाइकु शाब्दिक हिसाबले ५÷७÷५ अक्षरको परिधीमा रहेर लेखिन्छ । पहिलो लाईन ५ अक्षरको हुन्छ, दोस्रो लाईन ७ अक्षर र तेस्रो लाईन पुन ५ अक्षरको हुन्छ यसमा जम्मा १७ अक्षरको संरचना रहन्छ । हाइकु लेख्दा विम्बको प्रयोगमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । सामान्य किसिमले अक्षर मात्र पूरा भएका हिसावले सार्थक हाइकुको निर्माण हुन सक्दैन ।
नेपाली साहित्यमा हाईकुको अवस्था कस्तो रहेको पाउनु भएको छ ?
नेपालमा हाइकुको शुरुवात् वि सं २०१९ सालवाट भएपनि वि सं २०६० सालमा आएर मात्र नेपाल निप्पन रिसर्च सेन्टरको स्थापना भयो । त्यस लगत्तै पहिलो हाईकु महोत्सव २०६२ सालमा प्रज्ञा भवन कमलादीमा भएको थियो । नेपाली साहित्यमा साठीको दशक देखि नै हाइकु नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । प्राध्यापक रामकुमार पाँडे र प्रकाश पौडेल माईलाको सक्रियतामा उक्त महोत्सव सम्पन्न भएको थियो । तत्पश्चात् सन् २०१३ मा नेपाल हाइकु केन्द्रको स्थापना भएको थियो । प्राध्यापक रामकुमार पाँडे नेपाल हाईकु केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने प्रकाश पौडेल माइला अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । हालै प्रकाश पौडेल माइलाको संयोजनमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय हाइकु महोत्सव २०१८ जापानमा सम्पन्न भएको थियो । यसले हाइकुलाई अझ सशक्त र नयाँ उचाईमा पुराउनेमा पूर्ण विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
हाइकुले नेपाली जनमानसमा कस्तो प्रभाव पार्दै गएको पाउनु भएको छ ?
हाल आएर नेपाली साहित्यमा हाइकु क्षेत्रको बाढी नै आएको अनुभूति हुन्छ । संरचनाको वारेमा सुनि सकेपछि र जानी सकेपछि लेखौं लेखौं लाग्ने साहित्य पनि हो यो । धेरै समय खर्चिनु नपर्ने र छोटो समयको फुर्सदको समय तथा यात्राकै क्रममा पनि हाइकु उतार्न सकिने हुँदा यो क्षेत्र नेपाली जनमानसमा लोकप्रिय बन्न पुगेको छ । हाल विभिन्न क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरु पनि हाइकु लेखनमा अग्रसर हुनु भएको देखिन्छ । पक्कैपनि यसले राम्रो प्रभाव पार्न सफल भएको छ भन्ने ठहर गर्न सकिन्छ ।
नाईलको सहारा यहाँको कृति हाईकु संग्रह तर्फ प्रसंग जोडौँ । हाईकु संग्रहको नाम नाईलको सहारा राख्नुभएको छ यसमा खास कारण केही छ कि ?
विगत २÷३ वर्षअघि म कामको सिलसिलामा अफ्रिकी मुलुकहरुमा रहने मौका पाएको थिएँ र त्यहाँ काम गर्दाका वखत लेखिएका हाईकुहरुको संग्रहित कृति हो यो । नाईल भन्ने संसारको सबैभन्दा लामो नदी र सहारा संसारको सबैभन्दा ठुलो मरुभुमि हो र यस पुस्तकमा नाईल नदीले त्यस स्थानलाई कसरी सहारा दिएको छ भन्ने कुरालाई बिम्बित गर्न खोजिएको छ ।
मुख्यगरी त्यहाँको के कुराले तपाईको ध्यान साहित्य तर्फ केन्द्रित गर्यो त ?
त्यहाँको केवल एउटै विषयवस्तुले मलाई ध्यान केन्द्रित गराएको भन्ने होईन । नेपाली संस्कृतिसँग उक्तस्थानको तुलना गर्दा गर्दै हामीसँग फरक भेटिने विभिन्न विषयवस्तुहरुले उव्जेको भावहरु साहित्यिक रुपमा समेटौं जस्तो लाग्यो जसको संग्रहित रुपमा नाईलको सहारा हाइकु संग्रह वन्न पुग्यो ।
साहित्यीक क्षेत्रमा यहाँको आगामी योजना के छ ?
साहित्यिक क्षेत्रकै योजना भनेर त त्यस्तो योजनाकै हिसावमा केही छैन, तरपनि मनमा उव्जेको भावहरुलाई समयले साथ दिए सम्म रचनात्मक रुपले उतारेर कृतिको रुप दिनेछु । हाइकु, बालसाहित्य तथा गीत रचना लगायतका सृजनालाई एकैसाथ लिई उपयुक्त समयमा प्रकाशन गर्दै लैजानेछु भन्ने लाग्दछ ।
कुराकानीको अन्त्यमा छौं, अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
साहित्य लेखनमा हरदम साथ दिनुहुने चितवन साहित्य परिषदका अध्यक्ष सुरेन्द्र अस्तफल तथा काव्य उत्सव काठमाण्डौंका संयोजक रिसी वराल लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा आभार प्रकट गर्दै आसन्न चाड शुभदिपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पाठकवृन्दमा शुभकामनाका साथ नेपाली साहित्य क्षेत्रलाई माया गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद
यहाँलाई पनि धन्यवाद ।